۩ शङ्कर लामिछाने स्मृति घर: जापानी हाइकु कविता
Posted by Jotare Dhaiba at 10:05 PM
दीपक जडित March 16, 2009 at 2:30 PM
हाईकु लेख्नेहरुको लागी यो ज्यादै राम्रो र पुरानो सामाग्री ( गाडधन) पो ल्याउनु भएछ । यदाकदा मैले नि हाईकुहरु लेखेको छु । पहिले पहिले स्कूलमा हुँदै हाईकु सम्बन्धी लेखहरु चाख मानी मानी पढ्थेँ । जापानीज हाईकुकै उल्थामा एक पटक
सर्र पिसाब फेर्दा
अहा ! क्या मज्जा !
लेखेको पढेको थिएँ मैले कस्ले लेखेको हो र कस्ले उल्था गरेको हो त बिर्षें तर निक्कै हाँसो आएको थियो । त्यस्तो गहनता केहि बोलेको छैन सायद यस्ले तर भद्दा अश्लिल पनि लागेको थिएन मलाई त ।
>Jotare Dhaiba< March 23, 2009 at 9:34 AM
सारै कुतकुत्याउने हाइकु रहेछ । हाँसो पनि लाग्यो । अल्लारे बेलामा अल्लारे हाइकु नै फेला पार्नुभएछ ।
गाडधन नै त यो होइन, शङ्करको यो रचना सर्वसुलभ नै छ । तर हाइकु भन्नासाथै संरचनात्मक रूपमा ५-७-५ को अक्षरसंयोजन बुन्नासाथै थानथान रचना बुन्ने जुन हल्का परिपाटी छ आम बुझाइमा, त्यसलाई यो छोटो रचनामार्फत शङ्करले झापट चखाएका छन् । यति छोटो लेखले धेरै पाठ पढाउन सक्ने रहेछ । धेरै पटकको पढाइबाट त्यो महत्ता बुझेर शङ्करप्रेमी तथा हाइकुप्रेमीहरूलाई यो खजाना टक्र्याएको हुँ ।